२ दिनको लागि एक महिलालाई प्रेमी चाहियो, त्यसको लागि १ लाख भन्दा बढी रकम पनि पाइने ! - Sacho Post
२ दिनको लागि एक महिलालाई प्रेमी चाहियो, त्यसको लागि १ लाख भन्दा बढी रकम पनि पाइने !
२०७८ आश्विन २७, बुधबार ०८:५२ बजे
संसारमा धेरै चीजहरू भाँडामा उपलब्ध छन्, तर न्यू योर्ककी एउटी महिलाले आफ्नो सासुका लागि यस्तो विज्ञापन दिएकी छन, जुन सोशल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ। यस विज्ञापनमा, महिलाले आफ्नो सासु सासका लागि ‘प्रेमी चाहिएको छ’ भनेर माग गरेको छ। दुई दिनसम्म उनकी सासुसँगै बस्ने यस व्यक्तिलाई १ हजार अमेरिकी डलर दिइनेछ।
न्यू योर्कको हडसन उपत्यकाकी ति महिलाले सोसल मिडियामा पोस्ट गरेको एउटा विज्ञापनमा भनिएको छ कि उनलाई विवाहको लागि र भोजमा उपस्थित हुन उनको ५१ वर्षीया सासुको लागि साथी खोजेकी हुन्। दुई दिनसम्म उनी आफ्नी सासुसँग बसिदिनु पर्यो, जसका लागि उनले एक हजार अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली १ लाख भन्दा बढी रूपैयाँ दिने बाचा गरेकी छन्।
वास्तवमा ति महिलाले कुनै विवाह समारोहमा जादै छिन, जसको लागि उनी आफ्नी सासुलाई पनि साथमा लिएर जान चाहन्छिन्। उनी सासूलाई यो विवाह भोजमा आफु जस्तै उनको सासुको सुन्दर जोडी देखियोस भन्ने चाहान्छिन्। विज्ञापनमा यस्तो लेखिएको छ कि “म विवाहको लागि शुक्रवार साँझदेखि शनिबार साँझसम्म मेरी सासूको लागि एक प्रेमी खोज्दैछु। उनीसँगै बस्नुपर्नेछ र आफ्नो सासूको हेरचाह गर्नुपर्नेछ। दुई दिनको लागि मात्रै। ”
विज्ञापनमा लेखिएको छ “सासूले सेतो लुगा लगाउँछिन्। र उनको जोडीले पनि उनि संग सुहाउँदो कपडा लगाउनु पर्ने हुन्छ। दुई दिनमा गरे बापत १ हजार डलर कमाउन सकिन्छ। ” विज्ञापनमा यो पनि लेखिएको छ कि यस कामका लागि उनलाई त्यस्ता व्यक्ति आवश्यक छ, जसको उमेर ४० देखि 60 वर्ष बीचको होस । मेरी सासु एक राम्रो डान्सर हुन् र बोल्न पनि राम्रो छिन्।
सोसल मिडियामा यो विज्ञापन देखेपछि, प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै टिप्पणीहरू आएका छन्। कसै-कसैले लेखेका छन् कि यो शानदार र रमाइलो छ छ, जबकि एक प्रयोगकर्ताले यसको लागि एक व्यक्तिलाई सिफारिस पनि गरेको छ। एक महिलाले भनिन् कि “जब मैले यो पढें, मैले तुरुन्तै मेरो लोग्नेको बारेमा सोचेँ।” तेस्रो प्रयोगकर्ताले लेखे कि “यो गाह्रो छ, तर कहिलेकाँही यो ठीक छ। यो एकदम राम्रो सम्झौता हो, त्यहाँ अरु त्यहाँ के अफर हुन सक्छ र?” भन्दै प्रश्न सोधेका छन् ।
दशैको मुखमा राति १२ बजेदेखि अनिश्चितकालीन ‘स्मार्ट लकडाउन’ लगाउने निर्णय
मानिसको आयु बढाउने अनौठो आलु, जसको सेवनबाट मानिस दिर्घायु बन्ने !
कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने बारे साउदी सरकारको नयाँ नियम
यी हुन् से’क्समा चरम सुख लिने तरिका
श्रीमानकाले मेरो प्या’स मेटाउनै सकेन म यो जीवन कसरी कटाउनु !
यसकारण महिलाहरु कण्ड’म लगाएर शारिरीक सुखभो’ग मन पराउँदैनन [कारणसहित]
बिहेमा भ’र्जि’न ‘ठहरिन’ यस्ताे सम्म गरिरहेका छन् यु*वतीहरु